पहिलो पटक चिनी उद्योगले विद्युत उत्पादन गर्दै, रिलायन्सले पायो अनुमतिपत्र - UrjaKhabar Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.
जेठ ०२, २०७५ 3704 ऊर्जा खबर/काठमाडौं
सरकारले पहिलो पटक चिनी मिललाई विद्युत उत्पादनको अनुमतिपत्र प्रदान गरेको छ । हिउँदमा खेर जाने उखुको खोस्टा बालेर विद्युत उत्पादन गर्न रिलायन्स सुगर एन्ड केमिकल्स इन्ड्रष्ट्रिज प्रालिलाई अनुमति दिइएको हो ।
कम्पनीले बारा मनहरवास्थित उद्योगबाट ३ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्नेछ । विद्युत खरिद गर्न विद्युत विकास विभाग र कम्पनीबीच २०७४ असोज २९ गते करार सम्झौता भएको थियो ।
उत्पादित विद्युत उद्योगदेखि ८.२ किलोमिटर दूरीको १३२ केभी परवानीपुर सबस्टेसनमा जोड्ने प्रस्ताव गरिएको छ । कम्पनीले हिउँदका ९० देखि १३० दिनसम्म विद्युत उत्पादन गर्नेछ ।
विद्युत प्राधिकरणले विद्युत खरिद सम्झाैता गर्न अालटाल गर्दै
कम्पनीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग २०७४ माघ १० गते कनेक्सन एग्रिमेन्ट (प्रसारण सम्झौता) गरिसकेको छ । केही समयभित्रै विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) गर्ने जनाइएको छ । पिपिए भएको एक वर्षभित्र विद्युत उत्पादन गर्न नसके स्वतः अनुमतिपत्र खारेज हुनेछ ।
चिनी उद्योगबाट विद्युतको सह–उत्पादनको प्रवर्द्धन गर्नेबारे २०७२ जेठ २ गते मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको थियो । ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत विकास दशक, २०७२ को बुँदा २७ मा पनि चिनी उद्योगसँग सह–उत्पादनको उत्पादित विद्युत खरिद गर्ने उल्लेख छ ।
कम्पनीसँग विद्युत ऐनको दफा ३५ अनुसार करार गरिएको छ । कनेक्सन एग्रिमेन्ट र पिपिए गरेपछि मात्र उत्पादन अनुमतिपत्र पाउने प्रावधान छ । तर, २ वर्षभित्र वित्तीय व्यवस्थापन र पिपिए गर्ने सर्तमा अनुमतिपत्र दिइएको छ ।
कम्पनीले प्राधिकरणमा पिपिएका लागि आवेदन दिएको करिब ४ महिना पूरा भएको छ । तर, त्यहाँबाट पिपिए नभएको कम्पनीको गुनासो छ । सञ्चालक समितिकाे बैठक नबसेकाे भन्दै प्राधिकरणले पिपिए नगरेकाे कम्पनीका सञ्चालक राजकुमार अग्रवालले बताए ।
विद्युत उत्पादनको अनुमतिपत्र उद्योग सञ्चालनमा रहँदासम्म कायम हुनेछ । यदि, उद्योग बन्द भए ३० वर्षमा स्वतः खारेज हुने व्यवस्था छ । विद्युत प्रसारण अनुमतिपत्रको अवधि भने २५ वर्ष तोकिएको छ ।